Ciidamo ka gadoodsan mushaar la'aan oo isbaaro dhigtay waddo muhiim ah - Caasimada Online
Home Warar Ciidamo ka gadoodsan mushaar la’aan oo isbaaro dhigtay waddo muhiim ah
Ciidamo ka gadoodsan mushaar la’aan oo isbaaro dhigtay waddo muhiim ah
Garowe (Caasimadda Online) – Ciidamo gadoodsan oo mushaar la’aan ka cabanaya ayaa muddo ku dhaw hal toddobaad waxey isbaaro dhigteen waddada xiriirisa Garowe iyo Gaalkacyo, sida ay wararka nagu soo gaarayaan.
Ciidamadaan oo aan tiradooda la sheegin ayaa ka cabanaya ineysan helin xuquuqdooda, waxeyna masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland u diideen iney isticmaalaan laamiga dheer ee labada magaalo isku xira.
Ciidanka ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudug.
Qaar ka mid ah saraakiisha oo aan magacooda la shaacin ayaa la hadlay warbaahinta, waxeyna sheegeen ineysan ka tagi doonin halkaas inta laga siinayo xuquuqda kaga maqan maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Deni.
Wararka aan heleyno sidoo kale waxaa ka mid ah in ciidamadaan ay u diideen inuu wadada isticmaalo wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo doonayay inuu wadadaas isticmaalo.
Wasiirka iyo wafdigiisa waxaa la sheegay iney kusii jeedeen Gaalkacyo, balse waxaa warar dambe ay sheegayaan iney diyaarad ku aadi doonaan halkaas.